kapilamanjelatra [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/1/120f63665c82ab2b9e67ee5b7096d66d.xhtml failed
Ny CD (Compact disk)
Ny DVD (Digital Versatil Disk misy milaza ihany koa hoe Digital Video Disk)
Ny kapila manjelatra (izay no anarana nomen’ny akademia na dia misy matroka aza izy ireny ) dia kapila mitondra donnees numeriques, ahitana ny cd sy dvd. Kapila vita amin’ny plastika io ary nasiana sosona mety lavahana amin’ny laser. Rehefa mikiky kapila manjelatra izany (gravure) dia mametraka lavaka kely marobe, misy lalina sy marivo mifanaraka amin’ny 1 sy 0. Tsy afaka averina ny fikikisana azy fa izay voasoratra dia tsy azo ovaina intsony, noho izany dia toetra itovizany amin’ny ROM io.
Misy teknolojia manokana iray ahafahana manamboatra kapila tsy mitovy amin’ny rehetra, satria azo fafana sy averina soratana ilay sosona fanoratra aminy. Kapila -RW (rewritable) no iantsoana azy raha kapila-R (recordable) iretsy voalohany. Ny Kapila-ROM moa dia ireo capila efa voasoratra.
Ny CD no kapila manjelatra niparitaka voalohany teo amin’ny tsena ary niaranitombo indrindra tamin’ireo solosaina multimedia. Mahazaka eo amin’ny 650 Mo hatramin’ny 900 Mo eo ny hadiriny.
Ny tena nampiasana azy dia hitahirizana feo Hi-fi (CD Audio) hasolo ny kasety izay efa nandimby ny kapila 33 sy 45 tours. Noho izany dia refesina amin’ny faharetan’ny hira zakany koa ny hadirin’ny CD. Avy eo moa nisy ny sarimihetsika (VCD na CD video) ary koa karazana donnees maro.
Nitombo ny filana hadiry eo amin’ny fitahirizana donnees, indrindra ny fitahirizana sarimihetsika amin’ny kapila, ary nivoatra koa ny teknolojian’ireo kapila. Ny DVD dia mitovy amin’ny CD ihany saingy lehibe kokoa ny hadiriny. 4,7 Go no tena fahita amin’izao fotoana izao, saingy misy koa ny 9 Go. Natao indrindra hahafahana mitahiry sarimihetsika tsy am-pihafiana izy, miaraka amin’ny sary mazava kokoa. Tsy mijanona amin’ny sarimihetsika akory ny fampiasana azy, fa misy ireo karazana donnees hafa koa.
Misy karazany roa ny kapila DVD amin’izao: -R (-RW) sy +R (+RW). Ny -R no nipoitra voalohany ary efa somary niparitaka vao nipoitra ny +R. Noho izany ny -R izany tokony ho voavakin’ny fitaovana mamaky DVD rehetra fa ny +R tsy voavakin’ireo taloha, saingy itsy farany kosa malaky kokoa ny fikikisana azy.
Marihina fa misy ireo DVD double layer, izany hoe misy sosona roa azo anoratana eo aminy, hany ka lasa avo roa heny ny hadiriny.
amin’izao fotoana izao dia efa miala any izay mety handimby ny DVD eo amin’ny tsena. Misy anankiroa izy ireo dia ny Blu-ray sy ny HD DVD. Ny Blu-ray izay vokatry ny teknolojian’i Sony dia misy sosona roa mahazaka any amin’ny 50 Go, ary ny HD DVD izay avy amin’i Toshiba dia misy sosona telo mahazaka 45 Go.
kapilamanjelatra.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43